MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: စစ်အဆိုးရ ကျဆုံးရမည်
Posted by Nyo Gyi at 26.1.08
၁။ ခင်ဗျား စီဘောက်က ပျူစာတွေပဲ ပေါ်နေတယ်။ ဇော်ဂျီဝမ်းပေါ်အောင် www.cbox.ws ကိုသွားပြီး ဇော်ဂျီဝမ်း သွင်းပေးရမယ်။
၂။ အပေါ်မှာ ကျနော်ပေးထားတဲ့ လိပ်စာကို ကလစ်ပါ။ ပုံတပုံ ထွက်လာမယ်။ ပုံမှာ အနီဝိုင်း ၂ခုပြထားတယ်။ www.cbox.ws ရောက်ရင် အဲဒီအတိုင်း ပြင်ပါ။ ပြီးရင် Apply လုပ်ပါ။
၃။ ဒါဆို Your code has changed. Get your new code here and reinstall your Cbox.
၄။ here ကို နှိပ်ပါ။ step 1 နဲ့2ဆိုပြီး ပေါ်လာမယ်။ step 1 မှာပါတဲ့ဟာတွေကို ကူးပြီးတော့ ခင်ဗျားရဲ့ဘလော့ဂ် Templateမှာ သွားထည့်ရမယ်။
၅။ အပေါ်မှာ ပြောထားတာတွေ အားလုံး ခင်ဗျား လုပ်ပြီးသား ဖြစ်နိုင်တယ်။ လုပ်ရင်းနဲ့ ၂ခု မှားနိုင်တယ်။
Zawgyi-One လို့ မရေးဘဲ Zawgyi_One လို့ မှားရေးထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ တစ်လုံးမှားတာနဲ့ မြန်မာလိုမပေါ်တော့ဘူး။ ပျူစာလိုပဲ လေးထောင့်တွေ ပေါ်မယ်။ :D